Warshad xirfadeed jaakad jilicsan oo tayo sare leh oo ragga ah
Dharkeena suufka ah ee tayada sare leh waa mid fudud, raaxo leh oo V-qoorta ayaa ku siinaya xoogaa meel aad ku neefsato. Waxay ku habboon tahay dharka dayrta, dharka dibedda iyo dharka gudaha. Waxay door ka ciyaari kartaa ilaalinta diirimaadka. Haddii aad iibsato tiro badan, si toos ah ayaad noola soo xiriiri kartaa si aad u hesho qiimaha ugu fiican.
Iibinta kulul, Ragga dhogorta goobeedka ah ayaa loo habeyn karaa diirimaadka iyo raaxada
Jaakadkan yar ee jaakad-gacmeedka ayaa ah qaab fudud, waxaad jeclaan doontaa dharka ku yaal labiska dayrta. Goynta joogtada ah ee dahaadhka jilicsan waxay bixisaa raaxo muddo dheer socotaa, waxay kaa dhigeysaa mid raaxo leh inta lagu jiro maalmaha dayrta qabow iyo silsiladda istaagga waxay bixisaa difaac dheeri ah